Tubooyinka Jikada - Doorashada Mid Wanaagsan - Tubooyinka Jikada ugu Fiican 2021 | Tubooyinka Musqusha ee ugu Fiican | WOWOW qasabadaha
Bogga ugu weyn / blog / Qasabadaha Aagga Jikada - Doorashada Mid Wanaagsan
2021 / 09 / 24 Qoondayntablog 2338 0
Laga soo bilaabo Lamoosh
Waqtigan xaadirka ah, qasabadaha jikada waa inaysan mar dambe noqonin qayb muhiim u ah jikada qofka. Iyada oo leh cabbirro badan, qaabab, dhammaystir, iyo naqshado suuqa yaal, saxanku dhab ahaantii waa qodob ka mid ah dejinta iyo timaha jikadaada. Haddii jikadaadu la timaaddo qaab casri ah oo casri ah ama qaab caadi ah, waxaa hubaal ah qasabad ku habboon jawiga aad rabto inaad ka abuurto meesha aad ku diyaarsato cuntadaada oo aad waqti tayo leh kula qaadato xubnaha qoyska.
Aad bay u fiican tahay, marka hore, waxaad u baahan tahay inaad doorato qasabad si dhab ah ugu habboon xiriirinta weelka jikada. Markaa, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso si aad u aragto tirada godadka dhajinta ee miiskaaga dushiisa, ama aad halkaas ku baabbi'iso. Hubi inaad doorato qasabad si dhab ah u sahlanaan doonta in lagu shaqeeyo si aad u furto isku -xidhka godka, oo dooro mid u dhigma cabbirka saxda ah ee xubinta qoyska ee saxanka jikada.
Waxaad suuqa ka heli doontaa noocyo badan oo ah qalabka qasabadda. Haddii aad dooratid inaad soo qaadatid qalab ama dhalaalaya, naxaas, birta aan birta lahayn, ama birta birta ah, waa inaad hubisaa in jirka qasabaddu ay tahay inuu ahaado mid aad ugu adkaysan kara qasabadaha jikada sare, fududahay in la dayactiro, culus, waa inaan la dumin ama si fudud u midab -doorsoomay, waana inay si fiican ugu habboon tahay mawduuca jikadaada.
Waxaad u baahan tahay inaad ogaato in qasabadda jikada ee laga sameeyay qalabka lagu yaqaan inay aad u adkaysanayso saamaynta taban iyo qasabadaha dahaarka leh ee dahaarka leh inay yihiin kuwo la awoodi karo. Aad bay muhiim u tahay inaad ku adkaysato inaad iibsato weji adkaysi leh - qasabadda aad dooratay waa inay socotaa muddo aad u dheer adigoon dhibbanayn miyaanad jeclayn oo keliya markaad aragto dhawaaqa dhibbanaha? Kaliya ku dadaal inaad doorato qasabad tayo fiican leh oo ku habboon miisaaniyaddaada maaliyadeed.
Waxa kale oo aad u baahan tahay inaad ogaato in bakhtiiyaha iyo xammuulku ay sidoo kale go'aaminayaan qaabka qasabadda - sidoo kale waxaa jira gacmo -hal iyo laba. Saxanka oo ka kooban hal daaweyn ayaa aad ugu habboon haddii aad rabto inaad xakameyso heerkulka iyo heerka biyahaaga la cabbo. Tuubbo laba-maarayn ah ayaa kuu oggolaanaysa inaad si sax ah u dhaqaajiso oo aad u maamusho heerkulka biyaha maxaa yeelay waxay leedahay kontaroolo gooni ah, mid biyaha kulul ah midna biyaha qabow. Waxaa loo tixgeliyaa in qasabadda tuubada labajibbaaran ay aad uga xarrago badan tahay qasabadda jikada hal tuubbo. Waxaa jira saddex nooc oo ah qaabab ka -qaadasho oo aad iibsan karto.
Kaliya kala sooc waxa aad caadiyan u isticmaasho qasabadda oo sii wad oo u iibso hadba baahidaada. Xitaa waxaad iibsan kartaa qasabad ku dheggan derbiga oo aan u baahnayn god daaqad oo bannaanka ah.
Haddii aadan ahayn nooca qofka doonaya inuu dukaamaysiga dukaamaysiga tago, kaliya gal khadka tooska ah waxaadna ka heli doontaa tan oo ah dukaamada qalabka internetka oo bixiya heshiisyo aad u wanaagsan oo ku saabsan qasabadaha.
Aasaaska Tuubbooyinka Jikada
Laga soo bilaabo Justin Sivan
Jikada kasta waxay u baahan tahay qasabad. Markay timaaddo doorashada xulashooyinkaan, qaabku waa labaad. Dhammaanteen waxaan rabnaa inaan doorano qasabad ka badbaadi karta xaalado aad u qallafsan, oo ay ku jiraan kumanaan wareeg/demin ah sannadkiiba iyo dhisidda macdanta biyaha adag, oo aan weli bixinno adeeg aan cillad lahayn sannadba sannadka ka dambeeya.
Maqaalkani wuxuu bixiyaa jawaabaha su'aalaha inta badan la isweydiiyo ee ku saabsan xulashada qasabadda. Adiga oo raacaya talada halkan lagu siiyay, ma ogaan doontid oo keliya sida loo doorto qasabad ku habboon, laakiin sidoo kale sida ugu habboon ee looga faa'iidaysan karo. Iyo, laga bilaabo doorashada nooca ilaa dhammaadka, waxaa jira waxyaabo badan oo ay tahay inaad tixgeliso markaad dooranayso qasabadda jikada ee xigta.
Waalku waa qayb ka mid ah qasabadda xakamaysa socodka biyaha. Waxaa jira afar nooc oo laga kala doorto: kubbadaha kubbadda, makiinadaha wax lagu buufiyo, makiinadaha riixa, iyo cajalladaha dhoobada. Aynu eegno nooc kasta oo aan helno fikrad guud oo ku saabsan sida ay u shaqeeyaan. Nooc kasta oo qasabaddu waxay leedahay dalool gudaha ah oo koontaroola socodka biyaha dhex maraya biyaha. Tayada waalka, oo leh ama aan lahayn gasket, ayaa go'aamisa isku halaynta iyo cimri dhererka qasabadda.
Waalka disc dhoobada.
Waalka dhejiska dhoobada, oo lagu garan karo kelideeda keli ah oo ku taal jid ballaaran oo dhululubo ah, waa horumarkii ugu dambeeyay ee teknolojiyadda qasabadda casriga ah. Noocani wuxuu ka kooban yahay laba cajaladood oo dhoobada ah: mid saxan ayaa taagan, halka kan kalena uu kaga hortagi doono ficil xiirid, biyo xiraya ama u oggolaanaya inuu dhaafo. Maadaama cajalladuhu ku dhow yihiin kuwo siman, shaabaddu waa biyo -mareen. In kasta oo ay ugu qaalisan tahay, tani waa waalka ugu kalsoon oo aad bay ugu yar tahay in uu jabo marka loo eego noocyada kale qaarkood.
Aad bay ugu badan tahay meelaha lagu dhaqo kushiinka, qasabadaha kubbadu waa nooca koowaad ee qasabadda aan biyo raacin. Biraha wareegsan ama kubbadda caagga ah ayaa loo adeegsadaa nidaaminta socodka biyaha, waxaana lagu garan karaa hal gacan oo ka gudubta daboolka qaabeeya kubbad wareegsan oo ka sarreeya saldhigga qasabadda qasabadda. Kubadaha caagga ah ayaa ugu dambayn duugoobay, laakiin kubadaha birta ah waxaa loogu talagalay inay sii dheeraadaan.
Qasabadda qasabadda kaydadka.
Tuubooyinka qasnadaha waxay leeyihiin biro godan ama kartari caag ah oo ku dhejisan weelka ama qasabadda. Waxay ku xiran tahay sida taxanaha godadka ku jira kartoomka ay ula jaanqaadaan asliga, biyuhu waa isku qasan yihiin oo waa la kontoroolaa. Qasabadahaani waa kuwo la isku haleyn karo, gaar ahaan haddii lagu qalabeeyay kartoon naxaas ah.
Tuubooyinka waalka riixa.
Cadaadiska wuxuu aad ugu eg yahay qasabaddaada dhaqe ee asaasiga ah taas oo ku shaqaysa furitaanka iyo xidhitaanka marinka biyaha kor u kaca iyo dhicidda jirida, oo kaa doonaya inaad adkayso (cadaadin) dhaqeyaha si aad u xirto qulqulka biyaha. Kuwani waa kuwa ugu jaban, laakiin waxay aad ugu nugul yihiin daadinta.
Wax kasta oo biyo qabsan kara ayaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo qasabad. Caadi ahaan, qasabadaha waxaa laga sameeyaa biraha hooseeya ee daxalka leh: naxaas, naxaas, naxaas ah, birta aan lahayn iyo birta zinc.
Daawaha zinc-kabka ah
Qasabadaha leh jidh daawaha zinc-kabka ah ayaa ka raqiisan. Si kastaba ha ahaatee, ma aha mid u waarta sida naxaasta oo aan ka badbaadin bay'adaha qallafsan ee qasabadaha sida naxaasta ama birta aan lahayn. Laguma talinayo marka la tixgelinayo iibsiga qasabadda.
Naxaasku waa xulashada ugu badan ee lagu taliyay sababtoo ah adayggiisa iyo kartida uu u leeyahay maaraynta heerkulka ba'an. Si kastaba ha ahaatee, qasabadaha naxaasta ah, oo ka kooban naxaas, zinc iyo macdanta `` lead '', waxay ku ridi karaan xaddi leedh ah biyaha la cabbo, taasoo keeni karta khatar caafimaad. Si loo yareeyo khatartan, Xeerka Biyaha Cabbitaanka Badbaadada ahi wuxuu u baahan yahay kuwa sameeya qasabadaha inay isticmaalaan wax ka badan 8 % leedhka qasabadaha naxaasta ah. Soo -saareyaashu waxay baarayaan farsamooyinka si ay u sii yareeyaan cadadka macdanta naxaasta ah.
Birta kuma jirto macdanta `` lead '', taas oo faa'ido weyn u ah jawiga sharciyeynta ee maanta. Taa bedelkeeda, birta aan birta lahayn waa daawaha birta oo ay ku jiraan ugu yaraan 10.5% chromium. Si kastaba ha ahaatee, birta birta ah ee loo isticmaalo qasabadaha badiyaa waa 304 birta aan lahayn, oo sidoo kale loo yaqaan 18/8 birta birta ah sababta oo ah waxay ka kooban tahay 18% chromium iyo 8% nikkel. Nickel wuxuu siiyaa birta qaab dhismeedkeeda qaaska ah, taas oo kordhisa xooggeeda iyo ductilitykeeda.
Haddii aad jeceshahay in jikadaadu noqoto mid lebisan, isku duwo midabka iyo dhammaynta qasabaddaada qalabka kale iyo qalabka kale. Naxaas, chrome iyo nikkel/birta birta ah ayaa laga heli karaa qiime kasta. Fursadaha muhiimka ah waxaa ka mid ah.
Chrome - Waa mid raagaya, raqiis ah, oo si sahlan loo ilaalin karo. Chrome -ka la safeeyey wuxuu bixiyaa muuqaal dhalaalaya oo dhalaalaya oo si fiican ugu habboon jikada casriga ah. Waxa kale oo aad ka heli kartaa dhammeystirka chrome -ka jilicsan, sida matte ama burush, oo la socon kara qaababka jikada badankood.
Nikkel - Waxay u istaagi kartaa xoqan iyo waxyeellada biyaha. Waxa kale oo ay bixisaa muuqaal aad u jilicsan, oo jilicsan. Caadi ahaan waa dhammaad ka qaalisan chrome waxayna si fiican uga shaqaysaa jikada qaabka ku-meelgaarka ah.
Titanium - Super minimalist, oo bixinaya sanduuq jilicsan iyo farsamo sare oo titanium ah.
Boorso - Porcelain waxay ku dari kartaa taabashada fasalka.
Hore:: Qaybaha qasabadda qasabka iyo alaabta Next: Ka dhig jikadaada mid xariif ah oo leh qasabadaha jikada
2021 / 09 / 24 1481